Tag: emeghasịkwa | Martech Zone
Kwarantaini: Oge eruola ka ị rụọ ọrụ
Wenezdee, Machị 18, 2020 Wenezdee, Machị 18, 2020 Douglas Karr
Nke a bụ, enweghị obi abụọ, ebe azụmahịa na-adịghị ahụkebe na ọdịnihu na-enyo enyo nke m hụworo n'oge ndụ m. Nke ahụ kwuru, M na-ele ndị ezinụlọ m, ndị enyi m, na ndị ahịa m ka ha kewara ụzọ dị iche iche: Iwe - nke a bụ, enweghị obi abụọ, nke kachasị njọ. M na-ele ndị m hụrụ n'anya na ịkwanyere ùgwù na iwe naanị na-akatọ mmadụ niile. Ọ naghị enyere onye ọ bụla aka ma ọ bụ onye ọ bụla. Nke a bụ oge iji nwee obi ebere. Mkpọnwụ - ọtụtụ ndị nwere ichere